Mpụga ọkụ ọkụ LED n'èzí 30 ogo 600w China Manufacturer
Nkọwa:Ohere Lightwut Lightw600w 15 ogo,Mpụga 600w Abụọ 30w,Mpụga Mpaghara 60w 60 ogo
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu Egwuregwu Football > Mpụga ọkụ ọkụ LED n&#39;èzí 30 ogo 600w
Ihe Nlereanya.: BB-LD-600W-CQ -2
Nsonaazụ a dịpụrụ adịpụ na mpụga ọkụ ọkụ 30 ogo 600w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. The mpụga ìhè ọkụ Lightdoor600w 15 ogo bụ ezigbo maka ọkụ n'elu nnukwu ámá egwuregwu, Arenas na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka basketball n'ụlọikpe, tennis n'ụlọikpe na bọl ubi. Nnukwu ọkụ ọkụ LED a na-enweta dị elu 600w ntụpọ 30w bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. The OutdoorLED Chakwasa ihie 600w 60 ogo bụ 5 afọ akwụkwọ ikike.
450W na-edu egwuregwu egwuregwu gburugburu ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Mmiri Lega Gara Ọdụdọ 500W Nhazi 240v Kpọtụrụ ugbu a
Ohere Lightwut Lightw600w 15 ogo Mpụga 600w Abụọ 30w Mpụga Mpaghara 60w 60 ogo Ohere nke Lightww LEDw 15 ogo Light Light 500w Ẹkot Light Light 100W Ufo Light Light 600wMast Stadium Light Osisi Light Light